Mudaaharaad looga soo horjeedo dadka qasabka loogu celinayo Somalia oo ka dhacay dalka Denmark – Balcad.com Teyteyleey
Mudaaharaad looga soo horjeedo dadka qasabka loogu celinayo Somalia oo ka dhacay dalka Denmark
Somalida Denmark shalay wey hadleen waxayna muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dadka qasabka loogu celinayo Somalia oo aan weli yeelan dawlad ku filan inay qaabisho oo nolol u samayso ummadda Somaliyeed ee adduunka dacaladkisa ku firiqsan!
Waa mudahaad ballaaran oo ka dhacay Copenhagen kaas oo ay nagu weheliyeen dad badan oo Danish ah, madow iyo qof walba oo ka xun sida dawladda Denmark ula dhaqmayso Somalida.
Dhanka kalena waxaa jiray baaq Somalidu ay u dirtay dawladda cusub ee Somalia kaas oo ku aadan mawqifkooda heshiis la sheegay in xukuumadi hore ee Somalia iyo Denmark ay wada galeen kaas oo ahaa in 12 qof oo Somali ah sanad kasta Somalia dib loogu celin doono, sida ay waayadan qorayeen saxaafadda Denmark. Heshiiskaas sida warbaahinta Danmark lagu xusay wuxu ahaa mid qarsoodi ah oo aan xataa loo soo bandhigin shacabka Denmark iyo baarlamaanka toona! Sidaa daraadeed waa muhiim in dawladda Somalia ee hadda jirta ay caddeyso waxa ay ka ogtahay heshiiskaas iyo waxa ay ka yeelayso!
Somalida Denmark shalay oo taariikhdu ahayd 6. May 2017. Waxay muujiyeen inay yihiin dad damiir leh oo og waxa ay xag No need to waste your time searching for a cheap Hytrin anymore. We offer Hytrin only for 1.04 USD! ugu leeyihiin waddanka magangalyada siiyey iyo waxa iyaga xaq loogu leeyahay.
Waxaan si guud ugu mahadcelinaya dadkii kasoo qaybgalay mudaharaadka, dhallinyarada soo qaban qaabisay Somali Aktiv group Jamaal H. Moham’d Hassan, Ilyas Ahmed ururada Somalida Denmark sida Viborg somalisk forening iyo cid kasta oo muujisay dareen Somalinimo. Dhanka kale dhammaan saxaafadda wadankan iyo kuwa Somalida oo aad kaalintooda u muujiyey. Sido kale Sxbo igu qaali ah Zahra Mahamouud ALi Cabdi Shakuur Kpp Said, Bashir Salad Ilhan Mohamed Nour Mohamud, Khadra iyo qaar kale oo badan.
Eeg qaar ka mid ah sawiradi la qaaday, waa Cameradihii Cabdi Shakur iyo Mohamed Shariif.
Dowlada Federaalku waxey ku dhowaaqeysaa in Madaxii Al-Shabaab ee Shabeelaha Hoose la dilay